China One Axis rotator Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
Imwe Axis rotator
Positioner ichabatsira robhoti kugadzirisa nzvimbo yebasa rakakura sezvinobvira kuitira kuti robhoti tochi isvike pairi uye kuwana yakanaka welding performance.
-Payload: 250kg uye inogona kugadziriswa
-Frame saizi: 1800mm * 800mm uye inogona customized.
Iyo imwechete axis musoro-muswe positioner ipositioner ine musoro furemu inotyaira kutenderera, uye furemu yemuswe inotevera kutenderera.Iyi positioner yakagadzirirwa chidimbu chebasa refu, tafura yebasa pakati pemusoro nemuswe inogona kutenderera kuisa chidimbu chebasa pane yakanakisa welding chinzvimbo.Iyi modhi inosanganisira: yepasi, musoro furemu, muswe furemu, tafura yekushanda, servo mota, RV inoderedza, nezvimwe.
Positionermode Voltage Insulation giredhi Tafura yekushanda Kurema Min Payload
HY4030A-250A 3 chikamu380V±10%,50/60HZ F 1800 × 800mm (mugadziri akaita tsigiro) 450kg 300kg
Welding application ine 1 axis musoro-muswe inotsigira chinzvimbo
Kubhadhara: 250kg, Frame size: 1800 * 800mm
Marobhoti matatu welding online
Mumufananidzo uyu unenge uine 3 welding robhoti uye imwe 4meters furemu pamhepo kusangana nehukuru saizi chigadzirwa
YOO HEART kambani inogona kupa vatengi nemashoko akasiyana ekutumira.Vatengi vanogona kusarudza nzira yekutumira negungwa kana nemhepo zvinoenderana nekukurumidzira kwekutanga.YOO HEART marobhoti ekurongedza makesi anogona kusangana negungwa nemhepo zvinotakura zvinhu.Tichagadzirira mafaera ese sePL, chitupa chekwakabva, invoice uye mamwe mafaera.Pane mushandi ane basa guru nderekuti robhoti rega rega rinogona kuendeswa kuchiteshi chevatengi pasina kurova mumazuva makumi maviri ekushanda.
Wese mutengi anofanira kuziva YOO HEART robhoti yakanaka vasati vatenga.Kana vatengi vaine imwe YOO HEART robhoti, mushandi wavo achave ne3-5 mazuva emahara kudzidziswa muYOO HEART fekitori.Pachange paine wechat group kana whatsapp group, ma technician edu ano shanda after sale service, magetsi, hard ware, software etc. anenge arimo. Kana dambudziko rimwechete rikaitika kaviri, technician wedu anoenda kucustomer company kunogadzirisa dambudziko. .
Q1.Mangani ekunze axis anogona YOO HEART robot kuwedzera?
A.Parizvino, YOO HEART robhoti inogona kuwedzera 3 mamwe axis ekunze kune robhoti iyo inogona kushandira pamwe nerobhoti.Kureva kuti, isu tine yakajairwa robhoti yebasa chiteshi ine 7 axis, 8 axis uye 9 axis.
Q2.Kana isu tichida kuwedzera mamwe axis kune robhoti, pane chero sarudzo?
A. Unoziva PLC here?Kana iwe uchiziva izvi, robhoti yedu inogona kutaurirana nePLC, yobva yapa masaini kuPLC kudzora ekunze axis.Nenzira iyi, iwe unogona kuwedzera gumi kana kupfuura ekunze axis.Iyo chete kushomeka kweiyi nzira ndeyekuti ekunze axis haigone kubatana nerobhoti.
Q3.PLC inotaurirana sei nerobhoti?
A. Tine i / O bhodhi mubhodhi rekutonga, kune 22 kubuda kwechiteshi uye 22 chiteshi chekuisa, PLC ichabatanidza I / O bhodhi uye kugamuchira zviratidzo kubva kurobhoti.
Q4.Tinogona kuwedzera zvimwe I/o port?
A. Nekungoita weld application, idzi I/O port dzakakwana, kana iwe uchida zvimwe, tine I/O inowedzera bhodhi.Iwe unogona kuwedzera imwe 22 yekupinza uye kubuda.
Q5.Ndeupi rudzi rwePLC rwaunoshandisa?
A. Iye zvino tinogona kubatanidza Mitsubishi neSiemens uyewo mamwe mabhureki.
Zvakapfuura: Maviri Axis Rotator
Zvinotevera: Kurodha nekuburitsa robhoti